RAHARAHAM-PIRENENA : « Ahiana mafy ny hala-bato hiteraka korontana amin’ny fifidianana »
Mbola tsy azo lazaina ho feno tanteraka ny fepetra hiatrehan’ny firenena ny fifidianana amin’ny taona 2018. 21 décembre 2017
Ny vahaolana ifotony mahakasika ny fiainam-bahoaka no tokony ho laharam-pahamehan’ny fitondrana satria latsaka anaty fahantrana lalina ny Malagasy amin’izao ary maro ireo tranga mila fandraisan’andraikitra. Io ny fanehoan-kevitra noentin’ny Rmtf na ny rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho an’ny fanarenana ifotony. Nambaran’ny mpandrindra nasionalin’ity vovonana ity fa hala-bato mihoa-pampana no hiseho mandritra io fifidianana io, ka ahiana ny hisian’ny korontana sy ny savorovoro aterak’izany eto amin’ny firenena.
“Misy ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena no mitaky fifidianana madio sy mitovy ho an’ny rehetra. Mikorontana sy miady an-trano ny fitondrana, misy te hanala ny praiminisitra, misy te hanangana fitondrana hiaraha-mitantana miaraka amin’ny mpanohitra ary misy te hanala mihitsy ny filoha, Hery Rajaonarimampianina. Ao anatin’izany korontana sy fotaka mandrevo izany no misy ny vahoaka sy ny firenena. Ao anatin’izany rivotra maloto izany ve no tadiavina hanaovana ny fifidianana. Tsy izao fitondrana izao mihitsy no hanao fifidianana madio, hala-bato manomboka eny amin’ny Fokontany ka hatrany amin’ny Hcc no hiseho eto”, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny Rmtf raha nanamafy ny fanambaràny.
Nambaran’ity farany hatrany fa efa manomboka sahady ny kajikajy politikan’ny mpitondra amin’izao ho fiatrehana ny fifidianana, satria tsy hanaiky ho resy ireo olon’ny fitondrana amin’io fifidianana io, ka hanao izay fara heriny amin’ny fampiasana volabe sy fahefana. Hatrany am-boalohany no efa nanakiana mafy ny fitondran-dRajaonarimampianina ny Rmtf. Anisan’ny tena notsindrian’izy ireo mafy tamin’izany ny tsy fisian’ny vahaolana mazava manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatr’izay difotry ny kolikoly ary very hasina tanteraka ny firenena kanefa any amin’ireo tsy laharam-pahamehana no mahamaika ny mpitondra.
“Tsy misy azo antenaina intsony amin’izao fitondram-panjakana izao”, hoy hatrany ny Rmtf. Nilaza izy ireo fa raha mitaha amin’ny fahoriam-bahoaka dia mila miala alohan’ny fifidianana ny Filoham-pirenena ankehitriny ka hatsangana ny fitondrana tetezamita. Miantso hatrany ny firaisankinan’ny vahoaka sy ireo hery velona rehetra eto amin’ny firenena hatrany ny Rmtf ho fanarenana an’ity firenena ity.
Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (98) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020 Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY (61) 16 octobre 2020 “Mahalany potika plastika 125g isam-bolana ny mpanjifa hazan-dranomasina ” FAKO (53) 19 octobre 2020 Nasaina nitatitra ny asa vitany ireo Governora 18 efa voatendry FILAN-KEVITRA TANY ANTSOHIHY (51) 16 octobre 2020